नेपालगञ्जमा थप एक जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमितको संख्या १ सय २ पुग्यो – Health Post Nepal
नेपालगञ्जमा थप एक जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमितको संख्या १ सय २ पुग्यो
२०७७ वैशाख २६ गते १६:३२
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो– संक्रमित उपचार गराइरहेका अस्पतालले अनुदानको लागि विवरण पठाउनु
शुक्रबार थप १ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा १६ वर्षे पुरुषमा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालगञ्जमा भेटिएका संक्रमितलाई सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा राखिएको छ।
यो सँगै नेपालमगञ्जमा कोरोना संक्रमितको संख्या २४ पुगेको छ भने नेपालभर १ सय २ पुगेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले पहिले देखिएका संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दा थप संक्रमित फेला परेको बताए।
नेपालमा भेटिएका १०२ संक्रमित मध्ये ३० जना उपचारपछि निको भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। तर, डिस्चार्ज भएका ३० जनामध्ये ३ जनामा पुनस् संक्रमण देखिएको छ।
प्रदेश १ मा ३१, प्रदेश २ मा ३०, बागमती प्रदेशमा ७, गण्डकी प्रदेशमा २, प्रदेश ५ मा २७, सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ५ जना संक्रमित फेला परेका छन् । जसमध्ये रुपन्देहीमा ३, नेपालगञ्जमा २४, धनगढीमा १, भरतपुरमा १, विरगञ्जमा २६, विराटनगरमा १७ जना उपचाररत रहेका छन् । सबैको संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको प्रवक्ता डा. देवकोटाले जानकारी दिए ।